Portfolio design gudaha guryaha casriga ah - Arrimaha Gudaha Villas classical Bucharest - studio Design Gudaha Noble, naqshada, naqshadeeye, ganacsiga, design, qiimaha
mashaariicda Gudaha design in ay gaaraan labada aqal, Villas iyo sidoo kale guri, waxaa mar kasta kartoo fikiri ay nolol, doorbidida iyo baahida qoys kasta. Qorshaynta iyo intii ayna of space ku nool waa qayb ka mid ah xawaaladaha mudnaanta design gudaha mashruuca. Waxaan bixinaa xal iyo soo jeedinta 3 D gaadhay heerar sare, qalabka iyo alaabta ee ugu tayada sareeya. Mashaariicda ka faylalka tacliimeed ee design gudaha for guryaheena, Villas raaxo sameeyey style classic adeegyada casriga ah macasha design gudaha ee Constanta, Bucharest, Ploiesti, Brasov, Galati.
1 bogga 7
Mashruucyada warfaafinta gudaha gudaha dhismaha guryaha casriga ah
Murerfirma Naqshadeynta Arimaha Bulshada wuxuu bilaabay inuu abuuro fikrado naqshadeysan oo gudaha ah oo loogu talagalay guryaha raaxada iyo hudheello laga soo bilaabo 2008. Anaga, tanu ma aha oo kaliya shaqo, laakiin waa qeyb ka mid ah nolosha nolosha. Waayo-aragnimadayada iyo heerka aqoonta sare waxay na siisay fursad aan ku noqono mid ka mid ah kuwa ugu caansan iyo kan ugu weyn ee dhismayaasha gudaha Roomaaniya. Mid kasta oo ka mid ah mashaariicda naqshadeynta gudaha waa mid gaar ah oo shakhsi ahaaneed iyada oo la tixgelinayo dhismaha dibedda iyo gudaha gudaha guriga iyo baahida macaamiisha. Illaa iyo hadda, waxaan ku guuleysanay guulaha mashaariicda 150 naqshadda gudaha ee guryaha caadiga ah istoodhka, Villas la tumo iyo adeegga maamulka mashruuca ku dhowaad 100 aan bixino bixinta qalabka loogu talagalay design gudaha. Kooxdayada isticmaali kartaa dhammaan waxyaabaha suurto galka ah iyo teknoolajiyada, dhammaan hababka design ka classical, baroque, cusub classical in Mediterranean casriga ah ama Scandinavian in la sameeyo qaab nololeedka guriga shakhsiga. Haddii aad ku talo si aad u iibsato mashruuc design gudaha, faylalka la joogo shuqullada by Shirkadda sameeyey taas oo ka caawin kara in aad go'aan ku saabsan qaabka ugu habboon ee gurigaaga ama guri. guryo raaxo Classic leh guryaha sofiitada la dabaqa style Mediterranean Villas casriga ah, waxaan la nooc kasta oo dhisme oo dalka oo dhan, oo ay ku jiraan Bucharest, Giurgiu, Brasov, Ploiesti, Constanta, Braila, Tulcea iyo Galati shaqeeyaan.
Naqshadeynta dhismayaasha casriga ah ee dhismayaasha casriga ah - Naqshadeynta naqshadeynta gudaha gudaha Villa Bucharest - Nobili Design Design